अनिल योन्जन तामाङको निर्देशनमा छुल्ठिम गुरुङले चलचित्र निर्माण गर्ने - Tamang Online
ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग राष्ट्रिय नेवा: खल: इजरायलको अध्यक्षमा राजकुमारी श्रेष्ठ चयन प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको दोश्रो अधिबेशन हुदै इजरायलमा सिसेक्पा तङनाम ५०८२ सांगीतिक धमका कार्यक्रम हुदै किराँत राई यायोख्खा इजरायलको अध्यक्षमा दिप कुमार थुलुङ् राई चयन नेपाली समाज इजरायलको ऐतिहासिक तेस्रो स्थापना दिवस मनाउदै नायिका मिरुना र लामा फुर्वाको केसमा मेरो भूमिका – मोहन गोले तामाङ थप्पड खाएका लामा भिक्षु फुर्वा तामाङको भनाई , खासमा के भएको रहेछ ? चलचित्र ‘कबड्डी ४’ की नायिकाविरुद्ध प्रदर्शन, सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने माग तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा तामाङ परिवारका सात जनाको मृत्यु मातृभाषामा पठनपाठन गराउने शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुदान दिइने राष्ट्रिय नेवा:खल: इजरायलको एघारौ वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा हुदै
काठमाडौँ । होम प्रडक्सनबाहेक अन्य ब्यानरमा देख्न मुस्किल पर्दैगएकी नायिका रेखा थापा चलचित्र डायरीमा भिलेनका रूपमा देखिँदै हुनुहुन्छ । सो चलचित्रको प्रवद्र्धन सामग्री सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक सामग्रीमा चलचित्रको कथा सार प्रस्तुत गरिएको छ । चलचित्रमा छुल्ठिम गुरुङ, सन्नी सिंह, रेखा थापा, रूपा राना, विनोद पौडेल, दिनेश डिसीलगायतको अभिनय रहेको छ ।
छुल्ठिम इन्टरटेनमेन्ट र एयर क्रु प्रोडक्सनद्वारा संयुक्त रूपमा निर्माण गरिएको चलचित्रलाई अनिल योन्जनले निर्देशन गर्नुभएको छ । चलचित्र नोभेम्बर रेनपछि डल्लीको रूपमा चर्चित छुल्ठिम गुरुङ चलचित्र डायरीको निर्मात्री हुनुहुन्छ । अभिनयबाट चलचित्र निर्माणतिर लाग्नुको कारणबारे नायिका छुल्ठिम भन्नुहुन्छ– “अभिनय कहाँ छाडेको हो र ? कथा राम्रो लागेकाले निर्माणतिर हात हालेको मात्र हो । ”
चलचित्र नोभेम्बर रेनमा डल्ली चरित्र स्थापित गरेजस्तै डायरीबाट जोयाको चरित्र स्थापित हुने दाबी गर्दै नायिका छुल्ठिम भन्नुहुन्छ– “अभिनयपछि म निर्माण क्षेत्रमै लाग्छु । यसलाई त्यसकै तयारीका रूपमा पनि लिन्छु । ” चलचित्रमा छेतेन गुरुङको कथा, शिव राम श्रेष्ठको छायाङ्कन र प्रविन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ । निर्देशक अनिल योञ्जनले चलचित्रलाई चैतसम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
« डण्डिफोरले हैरान पारेको छ ? उपचार यसरी गर्नुहोस् …. (Previous News)
(Next News) तामाङ चलचित्र:ताङ्जिम बोर्जी नायिका – सिल्पा तामाङ »
ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै
इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने
लामा भिक्षु र नायिका मगरको विवाद मिलिसकेको छैन – घेदुङ अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ
अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन
तेलअविव - ह्योल्मो हाम्रो पहिचान,हाम्रो अधिकार,ह्योल्मो भाषा, भेषभुषा,... बाँकी यता
तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता
tamang online / June 20, 2022
चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता
याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता
tamang online / June 13, 2022